Teknika japoney taloha hanamboarana ny vilany tanimanga | Famoronana an-tserasera
Ny fanamboarana sambo iray nalatsaka mba hamerenana azy io amin'ny tany am-boalohany izay tsy ananany fahasimbana, dia saika herculean asa ary mila faharetana be ianao hanatanterahana azy. Farany maro no milavo lefona ary manipy azy amin'ny tany mba hanaparitahana azy an-jatony.
Saingy misy mpanao asa tanana sasany izay manana fahaiza-miasa sy faharetana ampy hamadika an'io vilany vaky io ho lasa zavakanto amin'ny alàlan'ny fampiasana teknika japoney taloha izay mampiasa tariby volamena hamerenana izany tanimanga izany amin'ny fanjakana tena mahavariana. Io ilay teknika nampiasain'i Charlotte Bailey, mpanakanto avy any Brighton, izay manova ireo sambo ireo ho lasa zavatra mendrika hampianarina.
Ny tena mahagaga dia izany teknika japoney taloha ampiasain'i Bailey Tsy mampiasa lakaoly hanamboarana ireo seramika ireo fa manisy tombo-kase azy ireo amin'ny alàlan'ny tariby volamena, volafotsy na platina. Ity teknika ity dia fantatr'i Kintsugi. Ny fomba tany am-boalohany dia mampiasa ireo fitaovana telo ireo, fa i Charlotte kosa mametaka ireo ampahany tapaka mifanaraka amin'izany amin'ny alàlan'ny fampiasana kofehy metaly volamena.
Mazava fa tsy azo ampiasaina amin'ny asany lehibe intsony ilay sambo, fa azo ampiasaina ho a ny haingo kanto indrindra azon'izy ireo natao tao amin'ny efitranony, satria ny valiny farany dia tena mahavariana noho ny hatsarany.
Izy io koa dia misy dikany ara-pientanam-po ary mifandray akaiky amin'ny fanodinana, satria io lo amin'ny lozam-pifamoivoizana io dia azo averina am-pitandremana sy fanoloran-tena ary ezaka mafy izay tsy maniry izany hahavery ny endriny voalohany. Fomba hanamboarana izay simbain'ny herin'ny fiainana na satria io no fotoana hanaovana azy.
Manana fampahalalana bebe kokoa momba ity mpanakanto ity ianao avy amin'ny bilaoginy aiza no hahitanao tolo-kevitra famoronana bebe kokoa toy izay mampihetsika azy ao anatiny.
Fito volana lasa izay dia nanana iray hafa izahay artista seramika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sambo tapaka dia namboarina tamin'ny teknika japoney taloha izay nampiasa kofehy volamena